မဟာယာနသည် ဗုဒ္ဓအဖြစ်သို့ရောက်ရှိရန် ဗောဓိသတ္တ (ဘုရားလောင်း) ကျင့်စဉ်ဖြင့် ကြိုးပမ်းသည်။ ထိုသို့ကြိုးပမ်းရာ၌ သတ္တဝါအားလုံး၏ အကျိုးအတွက်ဟူ၍ သဘောထား၏။ ဤသည်ကို ဗောဓိသတ္တယာန (ယာန - ယာဉ်၊ ကျင့်စဉ်၊ ဝါဒ) ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။[note 1] မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာသည် ဗောဓိသတ္တကျင့်စဉ်မှတဆင့် ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွက် ဗုဒ္ဓဖြစ်မည့် ပန်းတိုင်ကို ရှာဖွေသည်။ ရဟန္တာအဆင့်ကို မပြည့်စုံမှုအဖြစ် မဟာယာနက ရှုမြင်သည်။ ထေရဝါဒဖက်တွင် မရှိသော ဗုဒ္ဓများ၊ ဘုရားလောင်းများသည် မဟာယာနဖက်တွင်ရှိ၏။ နမူနာအနေဖြင့် အမိတာဘာ ဘုရားဖြစ်၏။ မာဓျာမိက (Madhyamaka) သုညတာဝါဒ (śūnyatā) ကဲ့သို့သော သဘောတရားများ၊ ဝိဉာဉ်ဏဝါဒ (Vijñānavāda)၊ တထာဂတဂါဘ (ဗုဒ္ဓမျိုးစေ့) သဘောတရားများကို အထူးအားပြုကြသည်။
မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာကို ယေဘုယျအားဖြင့် စရိုက်ခွဲခြားခြင်း
Woodhead၊ Linda; Partridge၊ Christopher Hugh; Kawanami၊ Hiroko, eds. (2016)။ Religions in the modern world : traditions and transformations (Third ed.)။ Abingdon, Oxon: Routledge။ ISBN 978-0415858809။ OCLC 916409066။
Foltz၊ Richard (2013)။ Religions of Iran:From Prehistory to the Present။ p. 95။ ISBN 978-1780743097။ 2017-12-18 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ In the centuries before the Arab conquests Buddhism was spread throughout the eastern Iranian world. Buddhist sites have been found in Afghanistan, Turkmenistan, Uzbekistan, and Tajikistan, as well as within Iran itself.
Johnson၊ Todd M.; Grim၊ Brian J. (2013)။ The World's Religions in Figures: An Introduction to International Religious Demography (PDF)။ Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell။ p. 36။ 20 October 2013 တွင် မူရင်း (PDF) အား မော်ကွန်းတင်ပြီး။2September 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။